ILönneberga hostele | Tyelela uHultsfred
ekhaya » yokuhlala » Hostele » Lönneberga ihostele
Ihostele yaseLönneberga imi ngaphandle kwe-Emil Lönneberga. Ihostele yaseLönneberga inenkonzo elungileyo, amava endalo amahle kunye nemisebenzi kuyo yonke iminyaka.
Ihostele ineebhedi ezingama-55. Amagumbi ahonjiswe ngokukodwa ngeebhedi ezimbini ukuya kwezintandathu kwigumbi ngalinye. Indlu yangasese ekwabelwana ngayo, ishawa, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye nebarbecue.
Kwiyadi kukho iindawo ezinkulu zokudlala abantwana. Ecaleni kweSilverån, ehamba emva kwehostele, unokuqesha ibhafu eshushu eyenziwe ehostele kunye ne sauna. I-Wi-Fi iyafumaneka kwihostele nganye ngeendleko ezongezelelweyo.
Apha kuthe cwaka kwaye kufutshane nendalo yokuhlala kuyo yonke iminyaka kwidolophu yakuloEmil.
ILönneberga ivuliwe unyaka wonke kwaye inamaphenyane okurenta
Ihostele inamaphenyane okurenta.
Kumgama wokuhamba indawo encinci yelali yokuqubha yiSilverån enonxweme oluncinci olunesanti. Kwindawo yaseLönneberga, ivenkile kaEmil yokuchwela iyabonakala.
NgoMvulo: 08–19NgoLwesibini: 08-19NgoLwesithathu: 08-19NgoLwesine: 08-19NgoLwesihlanu: 08-19NgoMgqibelo: 08-19NgeCawa: 08-19
ILönnebergavägen 7, 577 94 ILönneberga
I-0495 - 400 36
2/5 2 kwiinyanga ezidlulileyo
Kulungile. Inxibe kakuhle. Kwakukho amabango aphezulu ngokungaqhelekanga ekucoceni emva kokuhlala, kwafuneka ndibhatale imali yokucoca nangona igumbi lalicocekile xa sihamba njengaxa sifika: /. Ukongeza, yayikude kakhulu kwiivenkile zokutyela kunye nezinto ezinomtsalane, ngaphandle kweBabulbybyn eyayonwabile.
1/5 2 kwiminyaka eyadlulayo
Amagumbi ayelungile kodwa ikhitshi, igumbi elingaphantsi kunye namagumbi osapho ayengekho mtsha ngokukodwa. Ngokwenene amava abamba iindwendwe, wayelungile kwaye enomsindo. Ukongeza, kuye kwahlawuliswa imali engenangqondo "yokuCoca okungavunyelwanga" nangona besicocekile ukuze kube mnandi njengaxa sasihamba kwaye sathembisa ukuzicoca de zamkelwa kodwa azamkelwa kwaphela. Ngokwenene musa ukucebisa ngokuya apho! Ndiziva ngathi umbuki zindwendwe wenza izinto ezininzi ukwenza imali ngayo yonke into!
Nantoni na oyenzayo, MUSA UKUQESHA OKU! Sifumene i-invoice yokucoca isixa esilinganayo nendleko yendlu yokuqesha abantu abangama-50 kuba bekukho isanti kwikhaphethi kumagumbi. Abasebenzi abarhabaxa ngokumangalisayo kwaye abajonganga nkonzo kwaphela. Nantoni na oyenzayo, SUKUQESHA oku kwimisebenzi yeqela
Kulungile kubusuku obunye. Izindlu zangasese ekwabelwana ngazo, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, igumbi lokutyela. Ngokutsha okutsha kwaye kulungile ukulala. Abasebenzi abanobuhlobo! Kukho indawo yokudlala ngasemva. Ayifumaneki kwisitulo esinamavili.
Sukurenta lendawo !!! Indlu ixabise i-SEK 9 ukurenta indlu yonke kwaye emva koko safakwa kwi-SEK 900 (ngaphezulu kwendleko yendlu yokurenta) kuba bekukho igrabile ekhaphethini !!! (besingenazihlangu ngaphakathi, siphumile kwaye somisa imigangatho) engenangqondo !!!!!